रोचक « News24 : Premium News Channel
काठमाडौं । कहिले काँही कुनै तस्वीरमा देखिएको कुरा वास्तवमा सत्य हुँदैन । त्यसलाई बुझ्नका लागि हामीले हाम्रो दिमागमा केही जोड लगाउनुपर्छ । त्यस्ता तस्वीरहरूलाई ‘अप्टिकल इल्युजन भनिन्छ । पछिल्लो समय
काठमाडौं । मानिसहरुले आजको अंग्रेजी मिति २२/०२/२०२२ लाई विभिन्न कारणले याद गर्ने भएका छन् । किनभने आजको अंग्रेजी मिति दुर्लभ प्यालिन्ड्रोम मात्र नभई एम्बिग्राम पनि हो । प्यालिन्ड्रोम, जसले शब्दहरू,
एजेन्सी । जापानमा एक अनौठो टीभी आविष्कार भएको छ । त्यहाँका एक प्राध्यापकले निर्माण आविष्कार गरेको टीभीको स्क्रिन चाट्न मिल्ने खालको छ । स्क्रीनको प्रोटोटाइपले त्यस स्क्रिनमा देखिएका खानेकुराको स्वाद
काठमाडौं । उत्तर कोरियामा नेटफ्लिक्स सिरिज स्क्वीड गेमको कपि बेच्ने विद्यार्थीलाई मृत्युदण्डको सजाय दिइएको छ । विद्यालयका सातजना विद्यार्थीले उक्त सिरिज हेरिरहेको भेटिएपछि अनुसन्धानका क्रममा एक जनाले उक्त सिरिजको कपि
एकैपटक डेढ किलो सुँगुरको मासु र साढे ३ किलो प्राउन खाएपछि…
एजेन्सी। दुनियाँमा अचम्म अचम्मका घटनाहरु घटेका सुनिन्छन् । यो चाहीँ चीनमा घटेको घटना हो । काङ नामका एक चिनियाँ ग्राहकले सुँगुरको डेढ किलो मासु र साढे तीन किलो प्राउन एकैचोटी
एजेन्सी । झट्ट सुन्दा जो कोहीलाई अचम्म लाग्छ । अचम्म नलागोस् पनि कसरी वनस्पतीबाट मासु फल्छ भन्दा । तर, सत्य सावित हुँदैछ, जौबाट नै मासु उत्पादन हुने र पशुवध गर्न
राजेन्द्र तारकिणी काठमाडौँ । ‘गेट अफ हेल’ अर्थात् ‘नर्कको द्वार’ भनेर चिनिने एउटा रहस्यमय गुफाको अनुसन्धान थालिएको छ । ‘नर्कको इनार’ पनि भनिने यो गहिरो गुफा यमनमा रहेको छ ।
एजेन्सी । लामखुट्टेबारे जानकारी दिनुपर्दा सायदै कसैले ‘सुन्दर’ शब्द प्रयोग गर्लान् । तर साबेथेस क्यानियस प्रजातिका लामखुट्टे निकै सुन्दर हुन्छन् । साबेथेस क्यानियस लामखुट्टेको यस्तो प्रजाति हो जसलाई ‘आई क्याचिङ’
एजेन्सी । आफ्ना ग्राहकलाई फरक अनुभुति दिलाउन विश्वमा विभिन्न किसिमका होटेलहरु सञ्चालन गरिएका छन् । चीनमा एउटा अनौठो होटल छ, जहाँ ६० हजार सिँढी उक्लिएर ग्राहक पुग्ने गरेका छन् ।
एजेन्सी । न्यूयोर्कमा एक प्रहरी अधिकृतले चक्कु प्रहार गरिएका एक घाइतेको ज्यान आलुचिप्सको खोल र टेप प्रयोगबाट जोगाएका छन् । अधिकृतले जोगाउन गरेको प्रयासको व्यापक प्रशंसा भएको जनाइएको छ। बीबसिीका
पोखरा । पोखरा महानगरपालिका—२१ फेदीपाटनका मुक्ति पौडेल कात्तिकको अन्तिममा व्याउनुपर्ने गाईले छ महिनाअघि नब्याउँदै दूध दिन थालेपछि दङ्ग हुनुहुन्छ । विसं २०७७ माघ २ गते परम्परागत तवरले बहर लगाएर प्रजनन्
कोरोना भाइरस विरुद्धको भ्याक्सिन लगाउन अण्डाको अफर !
एजेन्सी । चीनमा मानिसहरु कोरोना भाइरस विरुद्धको भ्याक्सिन लगाउन डराइरहेका छन् । जसका कारण चीन सरकारले मानिसहरुलाई कोभिड भ्याक्सिन लगाउनका लागि उत्प्रेरित गर्न वा लोभ्याउन अनौठो खालको अफरको घोषणा गरेको
च्याङ्ग्रा खान गएको हिउँचितुवा च्याङ्ग्राकै खोरमा थुनिएपछि…
मनाङ । च्याङ्ग्रा खान गएको हिउँचितुवा च्याङ्ग्राकै खोरमा थुनिएको छ । मनाङको नार्पा भूमि गाउँपालिकास्थित फु गाउँमा रहेको फु हिमालयन च्याङ्ग्रा पालन कृषक समूहको च्याङ्ग्रा गोठमा मङ्गलबार राति हिउँ चितुवाले
हातैले बनाइएको संसारकै ठूलो किताब !
एजेन्सी । उत्तरी हंगरीको सिनपेत्रीमा बसोबास गर्ने बेला वर्गले हातैले बनाएको किताब संसारकै ठूलो किताब भएको दाबी गरेका छन् । ७१ वर्षका बेलाले किताब बनाउनका लागि किताब बाइन्ड गर्ने पुरानो
अन्टार्कटिकामा एपेन्डिक्स फालेर मात्र बसोबास गर्न पाइने
एजेन्सी । हुन त संसारका जुनसुकै ठाउँमा बसोबास गर्नेहरुले पनि विभिन्न नियम कानून तथा शर्तहरु पालना गर्नुपर्दछ । तर यो दुनियाँमा एउटा यस्तो ठाउँ छ, जहाँ बस्नका लागि आफ्नो शरीरको